Soo saaraha iyo alaab-qeybiyaha dhammeeya dusha sare ee jumlada | Saxnimada QY
Daawaynta kulaylku waa nooc ka mid ah tignoolajiyada farsamaynta kulaylka ee birta. Qalabka ayaa si tartiib tartiib ah u gaaraya qaabka iyo waxqabadka la filayo iyada oo loo marayo kuleylka, ilaalinta kulaylka iyo qaboojinta xaaladda adag. Hababka daaweynta kulaylka birta ayaa qiyaas ahaan loo qaybin karaa saddex qaybood: daaweynta kulaylka guud, daaweynta kulaylka oogada iyo daaweynta kulaylka kiimikada. Guud ahaan, qaabka qaybaha iyo guud ahaan isku dhafka kiimikada lama beddelin. Beddelidda qaab-dhismeedka yar-yar ee gudaha qaybaha, ama beddelidda isku-dhafka kiimikada ee dusha qaybaha, waxqabadka isticmaalka qaybaha waa la hagaajin karaa. Dabeecaddeedu waa in la hagaajiyo tayada gudaha ee qaybaha, taas oo inta badan aan la arki karin.
Madow oksaydhaysan aiyo Black Anodized
Daaweynta Oxidized Black waa habka caadiga ah ee daaweynta dusha kiimikada. Mabda'a ayaa ah in la soo saaro filim oksaydh ah oo ku yaal dusha birta si loo go'doomiyo hawada loona gaaro ujeedada ka hortagga miridhku. Daaweynta madowga ah waxaa loo isticmaali karaa marka shuruudaha muuqaalku aysan sarreyn. Daaweynta madow ee dusha sare ee qaybaha birta waxaa sidoo kale loo yaqaannaa blued. Anodizing waa oksaydhka korantada ee biraha ama alloys-ka. Aluminium iyo alloyskeeda waxay sameeyaan lakabka filimka oxide ee alaabooyinka aluminium (anode) ee hoos yimaada ficilka hadda la dabaqay ee hoos yimaada korantada u dhiganta iyo xaaladaha habka gaarka ah. Haddii anodizing aan la cayimin, waxa badanaa loola jeedaa sulfuric acid anodizing.
Daalidda waxaa loola jeedaa isticmaalka farsamooyinka, kiimikooyinka ama saamaynta korantada si loo yareeyo qallafsanaanta dusha sare ee qalabka shaqada si loo helo dusha dhalaalaya oo siman. Waa isticmaalka qalabka wax-soo-saarka iyo walxaha wax-soo-saarka ama warbaahinta kale si loo beddelo dusha sare ee shaqada.
Daaweynta nitriding waxaa loola jeedaa habka daaweynta kulaylka kiimikaad kaas oo atamka nitrogen ay soo galaan oogada shaqada ee meel dhexdhexaad ah heerkul gaar ah. Alaabooyinka Nitrided waxay leeyihiin iska caabin aad u fiican, iska caabin daal, caabbinta daxalka iyo iska caabinta heerkulka sare. Birta nitrided ee caadiga ah oo ka kooban aluminium waxay heli kartaa engegnaan sare iyo lakabka sare ee adkaysiga u adkaysta nitriding ka dib, laakiin lakabka adag ayaa aad u jajaban. Taa lidkeeda, birta daawaha hoose ee chromium ka kooban ayaa leh adayg hoose, laakiin lakabka adag ayaa aad u adag, oogadaheeduna waxay leedahay caabbinta xidhashada iyo iska caabinta daxalka.
Hore: Habaynta Shaabada
Xiga: Robotics & Smart Robots
Dhamaystirka dusha sare ee birta